အကောင်းဆုံး Escape Room Board Games 25 ခု | အပန်းဖြေပေးပါ။
အကောင်းဆုံး Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းများ
ဣဇာက်သည် | 20/12/2021 14:55 | အဆင့်မြှင့်တင် 20/12/2021 16:06 | ယေဘုယျ
အ ဘုတ်ဂိမ်း Escape Room ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် Escape Rooms များကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဂိမ်းမပြီးဆုံးမီတွင် အခန်းအပြင်ထွက်ရန် သဲလွန်စများကို ရှာဖွေရမည့် ပါဝင်သူအုပ်စုတစ်စု ပိတ်လှောင်ခံထားရသည့် အခန်းများ သို့မဟုတ် အခန်းများပါသည့် ဇာတ်ညွှန်းများကို အခြေခံထားသည်။ .ရာသီဥတု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဗျူဟာမြောက်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဂိမ်းတစ်ခု။
ဒီအခန်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေလည်း လူသိများလာပါတယ်။ ဤအမျိုးအစား၏ဘုတ်ဂိမ်းများအထူးသဖြင့် ကပ်ရောဂါပြီးနောက်၊ ဤအခန်းအများအပြားကို လုံခြုံရေးအတွက် ပိတ်ထားသောကြောင့် သို့မဟုတ် ဝင်နိုင်သောအဖွဲ့များ၏ စည်းကမ်းချက်များတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဒါကြောင့် သင့်အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ်။ မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများအားလုံးနှင့်. အသက်အရွယ်မရွေး အရသာရှိပါသည်...
1 အကောင်းဆုံး Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းများ
1.1 ThinkFun's Escape The Room - ဒေါက်တာ Gravely ၏လျှို့ဝှက်ချက်
1.3 Escape Room ဂိမ်း ၂
1.4 ထွက်ပေါက်- တိမ်မြုပ်နေသောရတနာ
1.5 သော့ဖွင့်! သူရဲကောင်းစွန့်စားမှုများ
1.6 Escape Room ဂိမ်း ၂
1.7 Escape Room ဂိမ်းကြောက်လန့်ခြင်း။
1.8 Escape Room ဂိမ်း ၂
1.9 Escape Room ဂိမ်း- The Jungle
1.11 La casa de papel - ထွက်ပြေးရန်ဂိမ်း
1.12 အခန်းတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်- ရှုခင်းကြည့်စံအိမ်ရှိ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်
1.13 ထွက်ပေါက်- စွန့်ပစ်ထားသော Cabin
1.14 ထွက်ပေါက်- ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တရားပွဲ
1.15 ဝှက်ထားသောဂိမ်းများ- 1st Case - Quintana de la Matanza ၏ရာဇ၀တ်မှု
1.16 ထွက်ပေါက်- Orient Express တွင် သေဆုံးခြင်း
1.17 ထွက်ပေါက်- ယုတ်မာသောစံအိမ်
1.18 ထွက်ပေါက်- လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြတိုက်
1.19 ဝှက်ထားသောဂိမ်းများ- ဒုတိယဖြစ်ရပ် - The Scarlet Diadem
1.20 ထွက်ပေါက်- ဖာရောဘုရင်၏ သင်္ချိုင်းဂူ
1.21 ထွက်ပေါက်- လျှို့ဝှက်ဓာတ်ခွဲခန်း
1.22 ထွက်ပေါက်- မစ္စစ္စပီတွင် လုယက်မှု
1.23 Escape Room ဂိမ်း- အချိန်ခရီးသွား
1.24 ROOM တွင် 25
1.25 ထွက်ပေါက်- မေ့နေသောကျွန်း
2 အကောင်းဆုံး Escape Room ဂိမ်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အကောင်းဆုံး Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းများထဲတွင် အချို့သောဂိမ်းများရှိသည်။ အထူးအာရုံစိုက်ဆွဲဆောင်နိုင်သော ခေါင်းစဉ်များ. ကြီးမားသောအသေးစိတ်အချက်များဖြင့် သင့်အား စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် သင့်ဦးနှောက်ကို ညှစ်ထုတ်ရမည့်နေရာတွင် မယုံနိုင်စရာဂိမ်းများ
ThinkFun's Escape The Room - ဒေါက်တာ Gravely ၏လျှို့ဝှက်ချက်
ThinkFun 76311၊ Escape ...
ဤဂိမ်းသည် မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပြီး 13 နှစ်မှ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတွင်သင်သည် Doctor Gravely ၏အမှောင်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားရန် ပဟေဠိများ၊ ပဟေဋ္ဌိများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့် သဲလွန်စများရှာဖွေရန် ကျန်ကစားသမား (၈) ဦးအထိ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
Dr. Gravely's Secret ကိုဝယ်ပါ။
အသက်6နှစ်မှ ကလေးများအတွက် ဖန်တီးထားသော ဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတွင်အခက်အခဲ3အဆင့်ရှိပြီး၊ ကစားတဲ့ဘီးများ၊ သော့များ၊ ကတ်များ၊ လှောင်အိမ်၊ အချိန်တိုင်းကိရိယာ၊ စမ်းသပ်မှုဒီကုဒ်ဒါစသည်တို့ပါရှိသည်။ သော့၏ကျွမ်းကျင်မှုစိန်ခေါ်မှုများကို အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန် အရာအားလုံး၊ ဗျူဟာပဟေဠိမာစတာ၊ ကံ၏ဘီးစသည်ဖြင့်။
Operation Escape Room ကိုဝယ်ပါ။
Escape Room ဂိမ်း ၂
Diset- Escape Room မှ...
16 နှစ်မှအသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် Escape Room ဘုတ်ဂိမ်း။ ၎င်းသည် ကစားသမား 1 ဦးအတွက် သို့မဟုတ် ကစားသမား2ဦးအတွက် ဖြစ်နိုင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ စွန့်စားခန်းများနှင့် ပဟေဠိများ၊ hieroglyphs၊ riddles၊ sudokus၊ crosswords စသည်တို့ကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ Con တွင် မတူညီသော မိနစ်2စွန့်စားခန်း 60 ခု ရှိသည်- Prison Island နှင့် Asylum နှင့် Kidnapped ဟုခေါ်သော နောက်ထပ် 15 မိနစ်ကြာ စွန့်စားခန်းတစ်ခု။
Devir - Exit: ရတနာ...
အသက် 10 နှစ်မှ ကစားသမား 1 ယောက်မှ4ယောက်အထိ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်သော Escape Room ဘုတ်ဂိမ်း။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Santa María ရှိ ပင်လယ်၏အနက်ရှိုင်းတွင် နစ်မြုပ်နေသော ရတနာကြီးကို ရှာဖွေရန် အံ့ဖွယ်ခရီးတစ်ခုတွင် သင့်ကိုယ်သင် နှစ်မြှုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Sunken Treasure ကိုဝယ်ပါ။
လော့ခ်ဖွင့်ပါ။ သူရဲကောင်းဆန်သော စွန့်စားခန်းများ...
ဤ Escape Room အမျိုးအစားဂိမ်းသည် ကစားသမား 1 ဦးမှ6ဦးအထိ ကစားနိုင်သည့် ကတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက် 10 နှစ်မှ လူတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဤဂိမ်းကိုဖြေရှင်းရန် ခန့်မှန်းခြေကြာချိန်မှာ2နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လွတ်မြောက်ခြင်းသည် သော့ချက်ဖြစ်သည့် စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပဟေဠိများကို ဖြေရှင်းရန်၊ ကုဒ်များကို decipher စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Heroic Adventures ကိုဝယ်ပါ။
Diset - Escape Room မှ...
ဤ Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းတွင်4နာရီထက်နည်းသော စွန့်စားခန်း 1 ခုပါရှိသည်။ ပဟေဠိများ၊ hieroglyphs၊ riddles၊ sudokus၊ crosswords စသည်တို့ဖြင့် မတူညီသောအခက်အခဲများနှင့်အသက်3နှစ်မှလူ5ဦးမှ 16 ဦးအထိကစားနိုင်ခြေရှိသည်။ ပါဝင်သောအခြေအနေများတွင် ထောင်ဖောက်ခြင်း၊ Virus၊ Nuclear Countdown နှင့် Aztec Temple တို့ဖြစ်သည်။
Escape Room ဂိမ်းကြောက်လန့်ခြင်း။
Diset- လွတ်မြောက်ရန် အခန်းနှစ်ခန်း...
အသက် 16 နှစ်နှင့်အထက်နှင့် ကစားသမား2ဦးအတွက် ဤစီးရီး၏ နောက်ထပ်ထုတ်ဝေမှု။ အထက်ပါအချက်များကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများကို မိနစ် 60 ထက်နည်းသော ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသော စွန့်စားခန်း ၂ ခု ပါဝင်သည်- The Lake House နှင့် The Little Girl တို့ပါဝင်သည်။ မင်းရဲလား
အသက်3နှစ်မှ လူ5ယောက်မှ 16 ယောက်အထိ ကစားနိုင်သည့် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ အထုပ်များ။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်41 နာရီကြာစွန့်စားမှုများအတွက် သင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးပါဝင်သည်- Dawn of the Zombies၊ Titanic on the Panic၊ Wonderland in Alice နှင့် Another Dimension။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများ၏အမည်များမှ ခန့်မှန်းနိုင်သည် ။
Escape Room ဂိမ်း- The Jungle
အကယ်၍ သင်သည် ဤဂိမ်းအမျိုးအစားနှင့် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေနေပါက၊ ဤသည်မှာ3နာရီထက်နည်းသော အခြားစွန့်စားခန်းအသစ် 1 ခုဖြစ်သည်။ စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့် အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများနှင့်အတူ။ ဤကိစ္စတွင်၊ ပါဝင်သည့်အခြေအနေများမှာ- Magic Monkey၊ Snake Sting နှင့် Moon Portal တို့ဖြစ်သည်။ 3-5 ယောက်နှင့် +16 နှစ်များအတွက်လည်းသင့်လျော်သည်။ အားလုံးအတူတူပျော်ဖို့ Family Edition ။
နာမည်ကြီး - Escape Party, ...
အသက် 10 နှစ်မှ ကလေးများအတွက် ဖန်တီးထားသည့် Escape Room ဂိမ်းအမျိုးအစား။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကစားနိုင်ပြီး အမြဲတမ်း အံ့သြစရာပါ။ သော့များယူကာ ကျန်အခန်းရှေ့မှ လွတ်မြောက်ရန် မေးခွန်းများစွာနှင့် ပဟေဠိများစွာဖြင့်။ ၎င်းတွင်မေးခွန်းပေါင်း 500 ကျော်ပါရှိသည်- 125 ပဟေဠိများ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ 125 ခု၊ 100 ပဟေဠိများ၊ သင်္ချာပုစ္ဆာပေါင်း 50၊ ဘက်ဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှု 50 နှင့် အမြင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှု 50 ခု။
Escape Party ကိုဝယ်ပါ။
La casa de papel - ထွက်ပြေးရန်ဂိမ်း
Netflix၊ La casa de papel၊ Escape Room တွင် အောင်ပွဲခံသည့် စပိန်စီးရီးများကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ ၎င်းတွင် သင်သည် Madrid ရှိ National Mint and Stamp Factory တွင် ရာစုနှစ်၏ ဓားပြတိုက်မှုပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခံရသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်။ လုယက်ရယူရန် လိုက်နာရမည့် အစီအစဉ်၏ ဇာတ်ကောင်များနှင့် အဆင့်များအားလုံး။
အခန်းတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်- ရှုခင်းကြည့်စံအိမ်ရှိ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်
ThinkFun 76368၊ Escape ...
ဤစီးရီးရှိ အခြားဂိမ်းသည် အသက် 8 နှစ်အထက် ကစားသမား 10 ဦးအထိ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤတွင် ကစားသမားများသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖြေရှင်းရန်၊ ထိုနေရာတွင် အလုပ်လုပ်သော နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး၏ ပျောက်ဆုံးမှုကို ဖြေရှင်းရန် ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အိမ်ကြီး၏ အခန်းများကို စွန့်စားကြမည်ဖြစ်သည်။
ထွက်ပေါက်- စွန့်ပစ်ထားသော Cabin
Devir - Exit: တဲ...
ဤဂိမ်းအတွက် ဆက်တင်သည် နာမည်တွင် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း စွန့်ပစ်ထားသော အခန်းဖြစ်သည်။ အားလုံးဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ဝန်းရံထားပါတယ်။ အဆင့်မြင့်အခက်အခဲများ၏ ပျော်စရာ Escape Room ဘုတ်ဂိမ်း။ အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက်အတွက်နှင့် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် ကစားသမား6ဦးအထိ ကစားနိုင်ခြေရှိသည်။ ဖြေရှင်းရန် ၄၅ မိနစ်မှ ၉၀ မိနစ်ကြား ကြာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
Abandoned Cabin ကိုဝယ်ပါ။
ထွက်ပေါက်- ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တရားပွဲ
Devir - Exit: တရားပွဲ...
အလားတူ ယခင်စီးရီးများမှ၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ပွဲတော်ကို အခြေခံထားသော ဤအခြား Escape Room လည်း သင့်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအသက် 10 နှစ်မှစတင်ပြီး 1 မှ5ကစားသမားအထိကစားနိုင်သည်။ လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေ၊ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန် ၄၅ မိနစ်မှ ၉၀ မိနစ်ကြား ကြာနိုင်သည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တရားပွဲကို ဝယ်ပါ။
ဝှက်ထားသောဂိမ်းများ- 1st Case - Quintana de la Matanza ၏ရာဇ၀တ်မှု
Hidden Games Scene မှ...
ဤ Hidden Games စီးရီး၏ ဖြစ်ရပ်များစွာ ရှိပြီး စပိန်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသည့် တစ်ခုမှာ ဤပထမဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူလို ခံစားရတယ်။ ပိုမိုလက်တွေ့ကျစေသော အယူအဆအသစ်ဖြင့် မတူညီသောဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းတွင် သက်သေအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးရန်၊ alibis ကိုစစ်ဆေးပြီး လူသတ်သူကို ဖုံးကွယ်ထားရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် အသက် 1 နှစ်အထက် ကစားသမား6ဦးမှ 14 ဦးအထိ ကစားနိုင်ပြီး ဖြေရှင်းရန် 1 နာရီနှင့်2နာရီကြား ကြာနိုင်သည်။
1st Case ကိုဝယ်ပါ။
ထွက်ပေါက်- Orient Express တွင် သေဆုံးခြင်း
Devir - ထွက်ပေါက် - သေခြင်း...
ဤဂန္ထဝင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝတ္ထုများနှင့် ရုပ်ရှင်များကို ဖန်တီးထားသည်။ ယခုလည်း အသက် 1 နှစ်နှင့်အထက် ကစားသမား4ဦးမှ 12 ဦးအထိ ပါဝင်နိုင်သည့် Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းကိုလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ အမျိုးအစားသည် နက်နဲသောအရာဖြစ်ပြီး လူသတ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီး သင်အမှုကိုဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သော ဒဏ္ဍာရီလာရထားဖြစ်သည်။
Orient Express တွင် Death ကိုဝယ်ပါ။
Devir- ထွက်ပေါက် ၁၁၊ The...
Exit စီးရီးတွင် ထည့်ရန် နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ အသက် 10 နှစ်အထက်နှင့် 1-4 ကစားသမားများအတွက် 45 မိနစ်မှ 90 မိနစ်အကြာတွင်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြေနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဇာတ်လမ်းက အနီးနားက အိမ်ကြီးတစ်လုံးကို အခြေခံထားတာပါ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး အထီးကျန်ဆန်သော နေရာတစ်ခု။ တစ်နေ့မှာ မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ အဲဒီကိုသွားခိုင်းတဲ့ စာတိုက်ပုံးထဲမှာ မှတ်စုတစ်ခုရလာတယ်။ ခံ့ညားသော အတွင်းခန်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော အလှဆင်မှုများသည် အံ့သြစရာပင်။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် တံခါးပိတ်သွားပြီး ကျန်တာတွေအားလုံးက မှတ်စုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
The Sinister Mansion ကိုဝယ်ပါ။
Devir - ထွက်ပေါက် 10၊ ပြတိုက် ...
ဤ Escape Room သည် အခြားပြတိုက်များကဲ့သို့ အနုပညာလက်ရာများ၊ ပန်းပုများ၊ ရုပ်တုများ၊ ရုပ်ပွားတော်များ စသည်တို့ကို ရှာဖွေရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ပြတိုက်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ သို့သော် ဤပြတိုက်တွင် မည်သည့်အရာမျှ မတွေ့ရဘဲ၊ သင်သည် ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အဆောက်အဦတွင် ပိတ်မိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားရပေမည်။
ဝှက်ထားသောဂိမ်းများ- ဒုတိယဖြစ်ရပ် - The Scarlet Diadem
ပထမကိစ္စနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ဤကိစ္စတွင် ချမ်းသာသော မှူးမတ်မိသားစုမှ အမွေဆက်ခံသူ ခိုးယူမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် သင်ရနိုင်သည်။ Greater Borstelheim ပြတိုက်မှ ခိုးယူခံခဲ့ရပြီး စာရေးသူသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော သတင်းစကားတစ်ခု ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်နာရဲ့ ဖိနပ်ထဲကိုဝင်ပြီး ဒီခိုးမှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို ရှာပါ။
2nd Case ကိုဝယ်ပါ။
ထွက်ပေါက်- ဖာရောဘုရင်၏ သင်္ချိုင်းဂူ
Devir - Exit: သင်္ချိုင်း...
ဤဂိမ်းသည် အသက် 1 နှစ်နှင့်အထက် ကစားသမား6ဦးမှ 12 ဦးအထိ ခွင့်ပြုသည်။ စွန့်စားမှုနှင့် အီဂျစ်သမိုင်းကို နှစ်သက်သူများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဇာတ်လမ်းသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး မှော်ဆန်လုနီးပါးရှိသော Tutankhamun ဂူသင်္ချိုင်းကဲ့သို့သော အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်နေရာများအားလုံးကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်သည့် အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးအတွက် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ်ကို အခြေခံထားသည်။ မှောင်မိုက်ပြီး အေးစက်နေတဲ့ ဝင်္ကပါထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျောက်တံခါးက ပိတ်သွားပြီး ပိတ်မိနေတယ်။ ထွက်နိုင်ပါ့မလား။
ဖာရောဘုရင်၏ သင်္ချိုင်းဂူကို ဝယ်ပါ။
Devir - ထွက်ရန်- အဲ...
ဤအခြားခေါင်းစဉ်သည် သင်နှင့် သင့်သူငယ်ချင်းများ ဆေးခန်းစမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအဖြစ် သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲရောက်တာနဲ့ နေရာကို ဗလာလို့ထင်ရပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့လေထုတစ်ခုရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြွန်မှ ဓာတ်ငွေ့များ စတင်ထွက်ပေါ်ပြီး သတိလစ်သွားသည်အထိ မူးဝေလာပါသည်။ သတိပြန်ရလာတဲ့အခါ ဓာတ်ခွဲခန်းတံခါးကို ပိတ်ပြီး ပိတ်မိသွားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အခု ရုန်းထွက်ဖို့ ပဟေဠိတွေကို ဖြေရှင်းရတော့မယ်...
The Secret Laboratory ကိုဝယ်ပါ။
ထွက်ပေါက်- မစ္စစ္စပီတွင် လုယက်မှု
Devir- ထွက် 14 ဂိမ်း၊ ...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Escape Rooms အတွက် နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်ဂိမ်း။ ၎င်းကို အသက်4နှစ်ထက်မပိုသော ကစားသမား 12 ဦးအထိ တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် ကစားနိုင်သည်။ နာမည်ကျော် ရေနွေးငွေ့သင်္ဘောများတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ခေတ်ဟောင်း ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၊ နှင့် ဓားပြတိုက်မှုတို့ကြားတွင်၊ Orient Express အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ချက်။
မစ္စစ္စပီတွင် ဓားပြတိုက်ခြင်းများကို ဝယ်ယူပါ။
Escape Room ဂိမ်း- အချိန်ခရီးသွား
ဤ Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းသည် အသက် 10 နှစ်မှ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး ကစားသမား3ဦးမှ5ဦးအထိ ကစားနိုင်သည်။ ပဟေဠိများ၊ hieroglyphs၊ sudokus၊ crosswords၊ riddles စသည်ဖြင့် ၁ နာရီထက်နည်းသော ဖြေရှင်းနိုင်သော ခေါင်းစဉ်တစ်ခု။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် အချိန်ခရီးသွားခြင်းကို အဓိကထားသော အကြောင်းအရာအလိုက် စွန့်စားခန်းအသစ် ၃ ခုပါရှိသည်- အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်။
Time Travel ကိုဝယ်ပါ။
ROOM တွင် 25
Asmodee- အခန်း 25၊...
အသက် 13 နှစ်မှ ကစားသမားများအတွက် ဆုဖလားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာမီကာလအတွင်းတွင် Room 25 ဟုခေါ်သော ဖြစ်ရပ်မှန်ရှိုးတစ်ခုနှင့် ပရိသတ်တစ်ဦးရရှိရန် ကြိုးစားရန် အနီရောင်မျဉ်းများဖြတ်ကျော်ထားသည့် မကြာမီကာလအတွင်း သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံထားသည့် စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ၎င်းတို့ကို စမ်းသပ်ရန် အန္တရာယ်များပြီး မမျှော်လင့်ထားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် အခန်း 25 ခန်းပါ ရှုပ်ထွေးသောနေရာတွင် သော့ခတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ လွတ်မြောက်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေရန်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အကျဉ်းသားများကြားတွင် အစောင့်များပါ၀င်ပါသည်။
အခန်း ၂၅ ခန်းဝယ်
Devir - ထွက်ပေါက် - ကျွန်း...
ဤသည်မှာ Exit စီးရီး၏ အခြားကြီးမားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုပင်ဖြစ်သည်။ အသက် 12 နှစ်ကျော်များအတွက် Escape Room စတိုင်စွန့်စားခန်းတစ်ခုနှင့် ကစားသမား 1 ဦးမှ4ဦးအထိ ကစားနိုင်ခြေရှိသည်။ စိန်ခေါ်မှုကို မိနစ် ၄၅ မှ ၉၀ အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းမှာ သင်ဟာ ပရဒိသုအနည်းငယ်သာရှိတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ ရှိနေပေမယ့် အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်တဲ့အခါ လွတ်မြောက်ရမယ့် သံကြိုးဟောင်းကြီးတစ်စင်းနဲ့ လွတ်မြောက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Escape Room ဂိမ်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။အခြားဂိမ်းများကဲ့သို့ အင်္ဂါရပ်များစွာကို ကြည့်ရှုရန် အရေးကြီးသည်-
အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် အခက်အခဲအဆင့်: ရည်ရွယ်ထားသည့် ကစားသမားများအားလုံး ပါဝင်နိုင်စေရန် ဇယား၏ အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို စောင့်ကြည့်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် ကလေးများပါဝင်နိုင်စေရုံသာမက လူကြီးများ၏ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ အခက်အခဲအဆင့်ကိုလည်း အဆုံးအဖြတ်ပေးပါသည်။ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခေါင်းစဉ်များဖြင့် စတင်ကာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောခေါင်းစဉ်များကို တဖြည်းဖြည်းရယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ကစားသမားအရေအတွက်: ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်တစ်ယောက်တည်း၊ စုံတွဲအဖြစ်ကစားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နိုင်တဲ့ Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းတစ်ခုလိုသလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။
အကွောငျး: ဒါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သက်သက် တစ်ခုခု ဖြစ်လာတော့ အရသာ ရှိတယ်။ အချို့က ထိတ်လန့်စရာ သို့မဟုတ် ထိတ်လန့်စရာ အကြောင်းအရာများကို နှစ်သက်ကြပြီး အချို့မှာ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၊ ၎င်းတို့ပရိသတ်များဖြစ်ကြသည့် ရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စစ်မှန်သော Escape Rooms ၏အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန် ကြိုးစားသော်လည်း၊ ဤဘုတ်ဂိမ်းအချို့ရှိ ဒိုင်နနမစ်များသည် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ကို သတိရပါ။
၎င်းအပြင် အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်း သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများ ဤဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုစီတွင် မည်သည့်အရာသည် သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် အရသာနှင့် အသင့်တော်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် တစ်ခုစီတွင် အထူးပြုထားသည့်အရာကို ရှာဖွေပါ-
သော့ဖွင့်: ဤဘုတ်ဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်သည် အခန်းများကို အစစ်အမှန်ဆန်မှုဖြင့် ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည့် တကယ့် Escape Rooms နှင့် ဆင်တူသည့် အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးရန် စဉ်းစားထားသည့် ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ထွက်ပေါက်- ဤအခြားအမှတ်တံဆိပ်သည် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၊ ပဟေဠိများနှင့် sudokus များအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို အဆင့်များ (အစပြုသူ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့်) ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။
Escape Room ဂိမ်း: ဤစီးရီးသည် ရုပ်ထွက်သွင်ပြင်၊ ရုပ်ထွက်နှင့် အသံ သို့မဟုတ် နောက်ခံတေးဂီတကို ထည့်သွင်းနိုင်သည့် မိုဘိုင်းအက်ပ်များပင် ပါဝင်သည့် ဂိမ်းများဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လေထုနှင့် နှစ်မြှုပ်မှုကို ပေးဆောင်သည့် ဂိမ်းဖြစ်သည်။
Hidde ဂိမ်းများ: ရဲအမျိုးအစားနှင့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ပိုမိုနှစ်သက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် လူသတ်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုကဲ့သို့ ကတ်ထူစာအိတ်တစ်ခုနှင့် ရောက်ရှိလာပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို ရရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » အကောင်းဆုံး Escape Room ဘုတ်ဂိမ်းများ